Telegram na-agba 400 nde ndị ọrụ na-arụ ọrụ nwere nnukwu ndozi | Gam akporosis
Telegram na-eme 400 nde ndị na-arụsi ọrụ ike na nnukwu ndozi
Ngwa ngwa izi ozi ngwa Telegram ekwuputala na ọ nwere nde mmadụ 400 na-arụsi ọrụ ike. A afọ gara aga ngwa nwere 300 nde na-abawanye bụ bukwanu mgbe na mgbochi nke downloads si Google Play Store abawanyele ọtụtụ.
N'agbanyeghị na ọ ka dị ogologo site na WhatsApp, Telegram na-eme ka ala ahụ sie ike site na nzọụkwụ ma na-achọ ịnye ndozi na nzuzo ma e jiri ya tụnyere ngwa na-eduga na mpaghara ahụ. Onu ogugu ndi mmadu na-ebudata ngwa a kwa ubochi bu ndi oru 1,5 nde kemgbe Eprel 2019 gara aga.
telegram Site na ọkwa ọkwa ọ na-azọrọ na ọ bụ Kasị ebudatara izi ozi ngwa na ihe karịrị mba 20, ihe ịga nke ọma na-eto eto n'ụzọ a ma ama n'agbanyeghị ihe ndị ọzọ na-apụta. Maka ememme a, ha na-akpọsa mmụba dị mkpa nke ngwa ahụ adịlarị na nke na-abịa.
1 Mgbanwe na interface
2 Ajụjụ ndị emelitere
3 Telegram kwere nkwa otu oku vidiyo nke afọ a
Mgbanwe na interface
Ngbanwe mbu nke Telegram di na interface, na-elekwasị anya na akwụkwọ mmado na ịmepụta ndekọ ọhụrụ iji tinye ha niile. Na ndekọ ahụ ọ ga-ekwe omume ịchọgharị na ịchọta nke kachasị mma n'oge ahụ n'etiti ihe mmado n'efu n'efu 20.000 na ngwa ahụ, cheta na ịnwere ike ịgbakwunye ndị ịchọrọ.
Ugbu a ọ ga-adị mfe ịhụ ndị dịnụ, chọta aha onye ọ bụla n'ime ha ma wụnye ha ngwa ngwa na ihe gbasara sekọnd. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị chọrọ Telegram emoticons na WhatsApp, ọ ga-ekwe omume mbupụ ha niile nke a nkuzi kere site n'aka onye ọrụ ibe anyị bụ Francisco Ruiz.
Ajụjụ ndị emelitere
Ajuju ajuju ajuju ajuju nyere ndi oru Telegram ohere na-emekọrịta ihe kemgbe amalitere ya na Jenụwarị nke afọ a. Ugbu a, ọ ga-enye anyị nhọrọ iji nweta azịza ozugbo anyị ga-aza azịza ajụjụ ndị ahụ ma ọ bụrụ na ha adaala ma chọọ inwe ike ịmụta ihe na mmejọ ọ bụla.
Ọ bụrụ n’ị mepụta @Quizbot, ndị na-emepụta ajụjụ ga-enwe ike ịhọrọ oge nzaghachi maka ajụjụ ndị a. Ogologo a dị ala, ya na anyị ga-amata n'oge dị adị iji jupụta ajụjụ a.
Telegram kwere nkwa otu oku vidiyo nke afọ a
Ọrụ a adịghị n'ime Telegram, ma ọ na-ekwe nkwa na ọ ga-abata na nke a niile 2020. Oku vidiyo vidiyo dị ezigbo mkpa, ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji ha ị nwere nkuzi Vidogram sara mbara, a mfe ngwa na a nnọọ enyi na enyi interface.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Telegram na-eme 400 nde ndị na-arụsi ọrụ ike na nnukwu ndozi
Xiaomi Mi Youth 10 na-enyocha atụmatụ ya niile na TENAA tupu ekwuputa ya na Eprel 27 a